10 Zavatra Tokony ho Fantatrao Amin'ny R, Python, ary Hadoop | NY
10 Zavatra Tokony ho Fantatrao Amin'ny R, Python, ary Hadoop
10 Antony tokony hianaranao R, Python, ary Hadoop
Ny Data Analytics Domain dia mitazona mihoatra ny andrasana amin'ny Software ho Service, na ny fikambanana SaaS, araka ny fantatsika tsara. Mila mandingana ny rehetra Big Data ary manana farafaharatsiny amin'ny asany izy ireo. Na dia izany aza, ny fametrahana ny fandrosoana amin'ny Data Sciences dia fototra ijerena ny hoe inona izany ary inona no fanamarinana ny Siansa momba ny siansa momba ny siansa. Ity no toerana R, Python ary Hadoop Tonga eto ary eto dia antony lehibe folo hahafantarana azy ireo. Ireo dia fitenim-pifaneraserana manan-danja izay tokony hianatra hiditra ao amin'ny sehatry ny siansa momba ny siansa, izay mirakitra anarana famonoana toy ny Google, Bank of America ary The New York Times.
Accessibility:Ahoana no fomba andrasan'ny mpanjifa hafa hianatra azy ireo? R, ohatra, dia ahafahana mampiditra sy mihazakazaka ary manome ny mpanjifany ny fahaleovan-tena mba hipetraka sy hijery izay toerana rehetra misy azy. Python, avy eo indray, dia mitaky kely kokoa ny mianatra ary ny sasany dia milaza fa io no tsotra indrindra amin'ny fandaharana programa. Hadoop, dia indray mandeha indray, azo jerena ao amin'ny rafi-piaviana misokatra, izay mahatonga azy io ho mora hita. Mifanaraka amin'ny trano misy anao, ny mpanjifa dia afaka mampiasa ny iray amin'izy ireo. Simple
fanavaozana: Raha ny mikasika ny fandinihan-draharaha momba ny informatika, dia ny fitenim-pifaneraserana mivelatra no misokatra indrindra. Ny fisoloana ny fampidiram-baovao, ny MapReduce ary ny Parallaly dia afaka mahavita azy tsara indrindra, ho toy ny vokatra aorian'izay ny dingana famoriam-bola tafiditra ao anatin'ny fanadihadiana dia tsy maintsy amboina tsy tapaka, izay tsy dia mitaky azy ireo loatra.
Cross Platform: Ny dialects amin'ny programa dia azo ampiasaina amin'ny dingana isan-karazany, mitovy amin'ny Windows, Mac OS X, Linux ary ny maro hafa, mamela ny mpanjifa hamita ny asany amin'ny gadget. R sy ny designers Python dia mieritreritra ny fomba hanamafisana ny fampahalalana lehibe kokoa amin'ny sehatra misimisy kokoa eo amin'ny dingana lehibe kokoa, ary mitazona fitifirana amin'ny SQL sy NoSQL databases.
Ny tsy fahafaha-manao dia tsotra: Ireo rindrambaiko fandaharana telo dia ampiasaina mba hikarakarana ny fampahalalam-baovao mafonja sy sarotra, antsoina koa hoe Big Data. Tokony ho azo atao amin'ny fahatsoran'ny fihenana amin'ny alalan'ny fampiasana ireny dialectika ireny, amin'ny antoko elitika na amin'ny processeurs maro, ny fialamboly mavesatra sy sarotra. Python dia mamela ny vaovao ambony noho ny zavatra R saingy samy niady hevitra tsara izy ireo Hadoop, manome ny mpanjifany ny safidy amin'ny fiankinan-doha samihafa mba haka izay iray hihazakazaka.
Fepetra mampiavaka: Miaraka amin'ny tombontsoa marobe toy izany, dia nitombo ny fitenim-paritra nanoloana ny fankatoavana ny birao ary manodidina ny 2 tapitrisa ny mpanjifa dia mampiasa azy ireo manerana izao tontolo izao amin'ny fitantanana ny siansa informatika. Hatramin'izao fotoana izao, nihanitombo ny rindrambaotin'i Oracle, Oracle, SAP, Netezza ary Teredata dia nanomboka nanamboatra interfaces izay fampiasana R ho fanohanana ara-tsiansa.
Fandrosoana mivantana: Ny fanatsarana vaovao amin'ny famolavolana ny fanovana dia mitranga ao amin'ny iray amin'ireo dialects telo ireo satria izy ireo no tena mivoatra sy azo ampiharina. Miaraka amin'ny fandrosoana vaovao toy ny ff sy bigmemory, dia azo eritreretina ankehitriny ny mitantana ny tahiry lehibe noho ny fahatsiarovana. Python dia mamela ny fampahalalam-baovao mahomby kokoa sy ny famerenana miaraka aminy Hadoop dia valisoa manokana.
Ny fahatsoran'ny famoahana: Hatramin'ny fandikana ny programa dia mampiditra tsara ny famaranana ny rakitra, izy ireo no fisafidianana ambony indrindra. Ny fanaraha-maso amim-pahamalinana miaraka amin'ny rakitra LaTeX dia ny famoahana ny rafitra ary koa ny ampahany amin'ny fametrahana ny tatitra momba ny tolo-teny amin'ny teny dia tena goavana tokoa ankoatra izany. Ny tsirairay amin'ireo dialectika dia manana rafitra ara-biôlôjia lehibe, ka mahatonga azy io ho mora kokoa ny mizara sy mitantana ny halehiben'ny vaovao.
Mora ampiasaina: R, Hadoop sy Python dia mora ny mahatakatra sy manamafy ny fandefasana ny fampahalalana avy amin'ny Microsoft Excel, Access, MySQL, SQLite ary Oracle, izay mamela ny mpanjifa miaraka amin'ny vokatra rehetra miasa tsy misy sakantsakana. Python dia nampiasaina tamim-pahombiazana ho an'ny Fiteny Natao Fiteny sy ny Apache Spark dia nahatonga ny fampahalalana hita ao Hadoop bunches misokatra kokoa.
fandaminana: Ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fitantanana ny rafitra dia ampahany tsy maintsy atao amin'ny fikambanana maneran-tany ary ny mpividy entana dia mifandray tsy tapaka amin'ny rafitra mba hiresahana ireo dialects ireo mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra, izay miantoka ny fivarotam-piarahamonina mahomby. Ny famotsorana an'i Anaconda izay vao haingana dia mihoatra noho ny 300 na maromaro bebe kokoa izay nanangona fanadihadiana fialantsasatra avy amin'ireo mpanjifany maneran-tany nandritra ny fifanakalozan-dresaka nataony, ka nampiditra azy ireo ho an'ny baka ho an'ny ho avy.
Fipoahana tsotra: Ny fanandramana sy ny fanadihadiana dia tsy dia mitaky amin'ireo dialaika ireo raha oharina amin'ny hafa raha jerena fa ny ankamaroan'ny fitaovam-pitsaboana dia natao mifanaraka amin'ireo fiteny ireo, izay mamela ny mpanjifa mametraka zavatra tsara amin'ny fahaiza-manao marimaritra kokoa. Ny tenim-paritra tsirairay dia manana tombontsoa manokana sy tombontsoa manokana kanefa mety hilaza izany R, Python ary Hadoop Ny fandaharana dia azo atao ary azo ampiasaina hijanonana mba hiarovana ny rafitrao sy ny safidy tsara indrindra amin'ny fotoana izay ilainao handefa ny rafitra iray manontolo.
Ahoana no hanombohana asa amin'ny data lehibe sy fanofanana momba ny fanofanana Hadoop